Man Utd waxay ka falcelineysaa sida Pogba u beeniyey is casilaadiisa kadib hadaladii Macron –
Home WARARKA CIYAARAHA Man Utd waxay ka falcelineysaa sida Pogba u beeniyey is casilaadiisa...
Man Utd waxay ka falcelineysaa sida Pogba u beeniyey is casilaadiisa kadib hadaladii Macron
Manchester United ayaa kula soo biirtay Paul Pogba, cambaareynta wararka been abuurka ah ee laga faafiyay ciyaaryahanka khadka dhexe, iyadoo sheegtay in 27 jirkaan uu ka tagay xulka France, ka dib hadalo ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, oo ku saabsan in diinta Islaamka ay tahay halka laga keenay. argagixisada caalamiga ah.
iyadoo warbaahintu hore u sheegtey Pogba uu ka hadlay wararka sheegaya inuu ka tagay xulka qaranka France.
Pogba ayaa ku tilmaamay sheekada “warar been abuur ah oo aan la aqbali karin”.
Xiddigii hore ee Juventus ayaa sidoo kale sheegay inuu talaabo sharci ah ka qaadi doono warbaahintii beenta ka faaafisey oo ah wargeyska the sun ee kasoo baxa boqortooyada ingiiriiska.
Isaga oo ka jawaabaya, Man United war ay ku qortay boggeeda internetka Isniintii, waxay taageertay go’aanka Pogba oo ay ku sheegtay in ciyaaryahanka Faransiiska ay ka go’an tahay inuu u ciyaaro dalkiisa.